Xiriirka ka dhexeeya wax akhriska iyo Aqoonta • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Xiriirka ka dhexeeya wax akhriska iyo Aqoonta
Xiriirka ka dhexeeya wax akhriska iyo Aqoonta
January 3, 2014 - By: Hanad Askar
Qore: C/risaq Maxamed Xuseen ( Ina xuseen dheere)
Diinta islaamku waxaa ay muhiimad weyn siisaa aqoonta iyo kasbashadeeda. Aayadii ugu horeysey ee quraanka kariimka, waxaa ay ahayd mid rasuulkeena (NNKH) lagu amray inuu wax akhriyo. Ilaahay subxaanu watacaalaa waxaa uu yiri. “ akhri” adigoo kaashanaaya magaca rabbigga ku abuuray. ( suurada Iqra , aayada 1.aad). Suuradaan waxaa kaloo uu ilaahay ku magacaabay oo ku xusay mid ka mid ah aaladaha loo adeegsado aqoonta iyo tacliinta kaas oo ah “ Qalinka”. Ilaahay waxaa kale oo Rasuulka (NNKH) ku amray inuu rabbiggiisa ka baryo in aqoontiisu kor u kacdo.Raadinta aqoontu waa waajib, waana qodob meel sare kaga xusan diinta islaamka.Horumarka wadan iyo ilbaxnimada aadamiga waxaa ay ku xiran yihiin hadba awooda ay dadku u leeyihiin iney wax akhriyaan. Sidaas darteed waxaa jira xiriir weyn oo ka dhexeeya akhriska, kasbashada aqoonta iyo kobcitaanka maskaxda iyo maanka.
Ummadaha lagu tilmaamo ilbaxnimada waa kuwa ay dadkoodu wax akhriyaan. Waxyaalaha ay wadamada horay u maray geliyaan lacagta badan waxaa ugu horeeya arimaha waxbarashada iyo barashada akhriska. Macalimiinta ugu khibrada badan dugsiyada wax laga barto waxaa lagu jiheeyaa oo ay akhriska baraan dhalaanka soo kacaaya. Wadanka Sweden waxaa uu mid yahay wadamada horumrka ka gaaray dhinaca dhaqaalaha iyo wershedaha. Dalka sweden ma laha kheyraad dabiici ah sida basiinka , dahamka, macdanta iwm, balse waxaa uu horumarka dalka saldhig u ah tacliinta iyo dadka oo la baray akhris, laguna barbaariyey raadinta aqoonta. Waxaa dadka reer sweden yiraahdaan tiirarka aqoonta iyo ilbaxnimadu waa awooda ay dadku u leeyhihiin iney si wanaagsan wax u akhriyaan. Haddaba waxaa muhiim ah inaan akhriska ka dhigano dhaqan joogto ah. Waxaa kaloo muhiim ah inaan isku dhiirigelino inaan wax akhrino si aan waxyaalo badan u ogaano. Waxaa lagama maarmaan ah inaan joogto ka dhigano booqashada meelaha wax lagu akhriyo sida maktabadaha buugaagta. Waxaa kaloo haboon inaan aalada casriga ah ee Internetka u isticmaalo ugana faa`iideysano dhinaca akhriska. Waalidiinta waxaa laga doonayaa iney caruurtooda inta ay yar-yar yihiin ku barbaariyaan dhaqanka wax akhriska iyo raadinta aqoonta. Gabayaa soomaaliyeed ayaa isagoo akhriska iyo aqoonra ka hadlaaya yidhi:
Teknoolojiyada aad aragtay ee lagu taxaashaayo- taleefoonka ,taarkiyo weliba Tv-ga
Waxa aalad lagu tababartoo nolosha taabaaya- aqoonyahan tijaabiyey oo tiigsadee helaye